January 2021 – မြန်မာသတင်းစုံ
ခင်ပွန်းခြေရှုပ်နေလို့ဆိုပြီး ဘုန်းကြီးထံအကူညီသွားတောင်းမိတဲ့ အမျိူးသမီးရဲ့အဖြစ်
အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ သူ့ခင်ပွန်းသည် ဖောက်ပြန်နေတာကို သိလိုက်ရပါတယ် စိတ်ထိခိုက်ပြီး သူ့ဘဝကို ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမယ်ဆိုတာ မသိတော့တာကြောင့်တောင်တစ်လုံးပေါ်မှာ သီတင်းသုံးတဲ့ ပညာရှိဘုန်းတော်ကြီးထံကနေ အကြံဉာဏ်ရယူဖို့ ထွက်လာခဲ့ပါတယ် လမ်းလျှောက်ခရီး၊ တောင်တက်ခရီးတွေအပါအဝင် ရက်အနည်းငယ်သွားပြီးတဲ့နောက်တောင်ထိပ်မှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီး ထံ ရောက်သွားပါတယ်။ တပည့်တော်မရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးမှာ သူ့အတွက်ပဲ အချိန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ နုပျိူမှုတွေကိုရင်းပြီးသူ့အနားမှာပဲ နေခဲ့တယ်။ သူ့ကို ဂရုစိုက်ပြီးလည်း ပြု စုခဲ့တယ်။ ခုတော့ သူက တပည့်တော်မထက်ငယ်ရွယ်တဲ့သူကို ရွေးသွားပြီ။ တပည့်တော်မမှာ အခု ဘာမှမရှိတော့ဘူး။ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းလဲ မသိတော့ဘူး”လို့ ဘုန်းတော်ကြီးကို လျှောက်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ဘုန်းကြီးက အမျိူးသမီးကို ကွတ်ကီးတစ်ခုစားဖို့ လှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။စားပြီးတဲ့အခါ အမျိုးသမီးကို “အရသာကောင်းလား”လို့ မေးလိုက်ပါတယ် အမျိုးသမီးက “တင်ပါ့.. ကောင်းပါတယ်ဘုရား”လို့ ဖြေတဲ့အခါ “နောက်တစ်ခုယူဦးမလား”လို့မေးလိုက်တဲ့အခါ “ယူပါ့မယ်.. ဘုရား”လို့ အဖြေရလိုက်ပါတယ်။ […]
Posted on January 31, 2021 Author admin	Comments Off on ခင်ပွန်းခြေရှုပ်နေလို့ဆိုပြီး ဘုန်းကြီးထံအကူညီသွားတောင်းမိတဲ့ အမျိူးသမီးရဲ့အဖြစ်
“ဒီလို ယောင်္ကျားမျိုးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ အချိန်မှသာအိမ်ထောင်ပြုဖို့ စဉ်းစားပါ“
မိန်းကလေးတိုင်း ဟာအချစ်ရေးမှာ ကံကောင်းချင်ကြ ပါတယ်။ ကိုယ့်အပေါ်ပျော်ရွှင်မှု၊ ဂရုစိုက် မှုပေးနိုင်ပြီးသစ္စာရှိတဲ့ယောကျာ်းမျိုးနဲ့ ပဲဆုံဆည်းချင် ကြပါတယ် ။အောက်ပါအချက်လေးတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ချစ်သူကောင်လေးမျိုး ကိုရထားပြီးပြီဆိုရင် သင်ဟာပတ်ဝန်း ကျင်မှာရော သူငယ်ချင်းအပေါင်း အသင်းကြားမှာပါသင့် ကိုဝိုင်းပြီး အားကျရ မယ့်ပျော်ရွှင်ဖွယ် အချစ်ရေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ် ။ ၁။ဦးစားပေးမှုမှာ သင်ကနံပါတ်တစ်ပဲ ။ အလုပ်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဖြစ်စေ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းကြားမှာ ဖြစ်စေသင်နဲ့ယှဉ်ရမယ့် ကိစ္စမျိုးရှိလာခဲ့ရင်သင့်ကိုပဲ ပထမဦးစားပေး ရွေးချယ်မယ့်သူမျိုးပါ။သင်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု၊ကျန်းမာရေးကိုလည်း သူကအမြဲစောင့်ရှောက်တတ်တဲ့သူမျိုးပါပဲ ။ဒီလို ယောင်္ကျားမျိုးနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှသာ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ စဉ်းစားပါ။ ၂။ရင်ဖွင့်စကားတွေနားထောင်ပေးပြီး အမြဲအားပေးသူမျိုး ။ သင်က ရင်ဖွင့်စရာတောင် မလိုပါဘူး။ သင့်မျက်နှာမှာ အလိုမကျတာတွေ့ရင် သူက ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကို သိနှင့်ပြီး သင့်မကျေနပ် ချက်တွေကို မေးမယ့်သူမျိုးပါ။ သင်ရဲ့အခက်အခဲတွေမကျေမနပ်ဆိုလာတဲ့ […]
Posted on January 31, 2021 Author admin	Comments Off on “ဒီလို ယောင်္ကျားမျိုးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ အချိန်မှသာအိမ်ထောင်ပြုဖို့ စဉ်းစားပါ“
အသက် (၂၆)နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အချစ်တော် မင်းသားချောစည်သူဝင်း
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ စည်သူဝင်းကေတာ့ MRTV-4 ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေမွာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကို ရရွိခဲ့တဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် သရုပ်ဆောင်မင်းသားချောတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ ဇန်နဝါရီလ (၃၁)ရက်နေ့လေးကေတာ့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် မင်းသားချော စည်သူဝင်းရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်ကျေ ရာက်တဲ့ နေ့ရက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် သရုပ်ဆောင်မင်းသားချော စည်သူဝင်းကေတာ့ ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ (၃၁)ရက်နေ့ မွေးနေ့ရ က်လေးမွာတော့ အသက် (၂၆)နွဈပြည့်မြောက်သွားခဲ့တာပဲဖြဈပါတယ်။ Happy Birthday ပါ ကိုရိုစည်ရေ။ ဒီနေ့ကျေရာက်တဲ့ မွေးနေ့ရက်လေးကေန စလို့ အနုပညာလောကမွာ ဒီထက်မေ ကအာင်မြင်မှုတွေရရွိပါစေ။ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကိုလည်း သက်ဆုံးတိုင်ရရွိနိုင်ပါစေလို့ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် သရုပ်ဆောင်မင်းသားချော စည်သူဝင်းရဲ့ ဒီနေ့မွာကျေရာက်တဲ့ မွေးနေ့ရက်လေးအတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းလေးတွေတောင်းပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ချစ်ပရိတ်သတ်တွေလဲသာယာသောနေ့လေးကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ကြပါစေ။ Credit– CeleGabar Photo Credit – Si […]
Posted on January 31, 2021 Author admin	Comments Off on အသက် (၂၆)နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အချစ်တော် မင်းသားချောစည်သူဝင်း
ကလေးငယျလေးရဲ့ အိပျမကျအရ ရှာဖှရောမှ ရှေးဟောငျး ဘုရားဆငျးတုတျောမြား တှရှေိ့
ကလေးငယျလေးရဲ့ အိပျမကျအရ ရှာဖှရောမှ ရှေးဟောငျး ဘုရားဆငျးတုတျောမြား တှရှေိ့ (Unicode) ကလေးငယျလေးရဲ့ အိပျမကျအရ ရှာဖှရောမှ ရှေးဟောငျး ဘုရားဆငျးတုတျောမြား တှရှေိ့ တနသာင်ျရီတိုငျး မွိတျခရိုငျ ကြှနျးစုမွို့နယျ ကြှဲခရနျကြေးရှာအုပျစုရှိကမာခြောငျးကြေးရှာတှငျ နထေိုငျသောခလေးငယျတဈဦးမှာ အိပျမကျရလို့တောထဲကို သှားရောကျကွညျ့ရှုခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါနရောတှငျ ရှေးခတျေကလို့ဆိုနိုငျတဲ့ဘုရားမြားပျေါထှကျနရော တှရေ့သညျ့ ခလေးငယျဟာမွငျတှရေ့သောဘုရား (၂) ဆူကိုအိမျသို့အရငျပငျ့ဆောငျပွီးနောကျ ကနျြ (၁၂) ဆူကိုပွနျလညျသှားရောကျပငျ့ဆောငျခဲ့သညျ။ယခုအခါမှာ ပငျ့ဆောငျလာသောဘုရားမြားကိုခလေးငယျ၏နအေိမျတှငျထားရှိခဲပါသညျ။ ခလေးငယျဟာနောကျဘုရားမြားကိုလဲပွနျလညျတူးဖျောပေးဦးမညျလို့ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ဘုရားဖူမြားလဲသှားရောကျဖူးမြှျောနိုငျပါကွောငျးအသိပေးနိုးဆျောအပျပါသညျ။ ပွနျလညျမြှဝပေေးပါ… အခုလိုအခြိနျပေးပွီးအဆုံးထိဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျးသာယာပြျောရှငျသော နလေ့ေးကိုပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။ Crd-Original Post (Zawgyi) ကလေးငယ်လေးရဲ့ အိပ်မက်အရ ရှာဖွေရာမှ ရှေးဟောင်း ဘုရားဆင်းတုတော်များ တွေ့ရှိ ကလေးငယ်လေးရဲ့ အိပ်မက်အရ ရှာဖွေရာမှ ရှေးဟောင်း ဘုရားဆင်းတုတော်များ တွေ့ရှိ တနသာင်္ရီတိုင်း မြိတ်ခရိုင် ကျွန်းစုမြို့နယ် ကျွဲခရန်ကျေးရွာအုပ်စုရှိကမာချောင်းကျေးရွာတွင် […]
Posted on January 31, 2021 Author admin	Comments Off on ကလေးငယျလေးရဲ့ အိပျမကျအရ ရှာဖှရောမှ ရှေးဟောငျး ဘုရားဆငျးတုတျောမြား တှရှေိ့
ကျုပ်သမီး သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့အတူ ခြံထဲကားမောင်းဝင်လာတာကိုကျုပ်အိမ်ဝရန်တာကနေရပ်ကြည့်နေမိတယ်။ သမီးပြောခဲ့ဘူးတာကတော့ သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီကောင်မလေးက သူ့အိမ်ကနယ်မှာတဲ့၊ ပြီးခဲ့တဲ့၂လ ၃လလောက်တုန်းက၊ သူ့မိဘနှစ်ယောက်လုံးကား မတော်တဆမှုဖြစ်ပြီးဆုံးပါးသွားကြတယ်တဲ့၊ တခြားမှီခိုစရာဆွေမျိုးသားချင်းရင်းချာကလဲမရှိဘူးတဲ့၊ ဒါကြောင့်သူနဲ့ အတော်လေရင်းနှီးတဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူကျုပ်သမီးဆီမှာ ခဏအတူခိုလှုံနေထိုင်ခွင့်တောင်းတယ်။ လောလောဆယ်သူ့ခမြာမှာလဲ ငွေကြေးကမလုံလောက်ရှာတော့ အဆောင်လေး အခန်းလေးငှားနေဖို့တောင်မတတ်နိုင်ရှာဘူး။ အလုပ်တစ်ဘက်နဲ့ကျောင်းတက်နိုင်ဖို့ ကျောင်းချိန်ပြင်ပ အလုပ်တစ်ခုကြိုးစားရှာနေတယ်တဲ့။ ကျောင်းစရိတ်နဲ့ အသုံးစရိတ်တွေအတွက်ငွေလိုတယ်လေ။ ကျုပ်သမီးလေးနာမည်က ချယ်ရီတဲ့၊ အသက်က၁၉နှစ်၊ အလှပန်းတွေအစွမ်းကုန်ဖူးပွင့်တဲ့အရွယ်ပေါ့။ သမီးက ကားကိုအိမ်ရှေ့ရပ်ပြီး ၂ယောက်သား အိမ်ထဲလျှောက်ဝင်လာခဲ့ရင်းနဲ့.. “မင်္ဂလာပါ..အမယ်.. ပါ့ပါးကဒီနေ့စောလှချည်လား..? အသေးလေးတွေထွက်မရှာတော့ဘူးလား…” ကြည့်..ကြည့်..သမီးလိမ္မာမရွှေချောက သူငယ်ချင်းရှေ့မှာအဖေကိုလာဒေါက်ဖြုတ်နေတယ်..၊ ဟုတ်တယ်လေခါတိုင်းကျုပ်ကအိမ်သိပ်ကပ်တာမှမဟုတ်ပဲ၊ ခုအိမ်အရင်ရောက်နေတာကိုပဲ အထူးအဆန်းကြီးလိုလို.. “ဟ..ငါ့သမီးကအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်အတော်အတွေးအခေါ်တွေအတော်မြင့်နေပါလားကွ၊ ပါးအိမ်ပြန်နောက်ကျတိုင်းချော်တောငေါ့ပြီးလျှောက်တွေးမနေနဲ့၊ အခုလဲသမီးတို့ကိုစောင့်နေရုံသက်သက်ပဲ.. ထင်ရာလျှောက်ပြောနေရင် တကယ်ပဲမေမေလေးအသစ်ရှာလာပေးခဲ့ရမလား..” “နောက်တာပါ ပါးရဲ့..ဒီမှာ သမီးပြောဘူးတဲ့သူငယ်ချင်းလေ၊ ချိုချိုထွန်း..တဲ့..သမီးတို.ကတော့ထွန်းလို့ပဲခေါ်ကြတယ်။ ဟဲ့..ထွန်း..ဒါက ငါ့ပါပါး ဦးရဲဝင်းအောင်..လေ” သမီးက သူ့သူငယ်ချင်းဟု ထွန်းဆိုတဲ့ခလေးမလေးကို ကျုပ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ […]
Posted on January 31, 2021 Author admin	Comments Off on စိတ်ပါလာပြီကွယ်
ညဘကျကွီးအရေးပျေါ ရောကျသှားသော ပရဟိတမတ်ေတာရှငျမလေး ခိုငျနှငျးဝေ
ညဘကျကွီးအရေးပျေါ ရောကျသှားသော ပရဟိတမတ်ေတာရှငျမလေး ခိုငျနှငျးဝေ ဗိုကျခပျြဘောငျးဘီ တငျးတငျးကပျြကပျြတှေ တနကေုနျဝတျ/ခါးကုနျးပွီးမကျြခုံးထိုးတော့ ဗိုကျခပျြက ဆီးလမျးကွောငျးကိုသှားပိတျပိတျမိတယျတဲ့လေ တပတျမှာ ငါးရကျလောကျ ဝတျဝတျနတေော့ ပိတျပိတျမိတဲ့နရောက ဆီးမှာပါတဲ့အမှုနျအမှားတှအေနယျထိုငျပွီး ဘယျဘကျဆီးလမျးကွောငျးပိတျ ကြောကျကပျပါယောငျ လာတယျ ၂၇ရကျနကေ့ မကျြခုံးသုံးယောကျထိုးပွီ အိမျပွနျလာ ဗိုကျခပျြဘောငျးဘီခြှတျပွီးပွီးခငျြး ဗိုကျအရမျးအောငျ့/ ဆကျတိုကျအောငျ့လာလို့ အူခေါကျသှားလားပေါ့ကိုယျထငျတာ ညဘကျကွီးအရေးပျေါပွေး အစာအိမျထငျပွီး အစာအိမျဆေးတှေ ၃ရကျသောကျ/ဆေးထိုး သကျသာသှားပွီး ခုမနကျ ၃၀ ရကျနေ့ မခံမရပျနိုငျအောငျပွနျအောငျ့လာလို့ အရေးပျေါ ပွနျပွေးရပွီ TVဓါတျမှနျရိုကျတော့ ဘယျဘကျဆီးလမျးကွောငျးပိတျကြောကျကပျယောငျနတေယျတဲ့လေ ဗိုကျခပျြဝတျရငျသတိပွုကွပါနျော ခဈြfriတို့ရေ ကြှနျမလို တနျဆလှေနျဘေးမဖွဈရအောငျ လှခငျြအုံးဟဲ့ဒျေါဖွိုးဖွိုးတဲ့ အိမျကယောကျြားက။ Credit#
Posted on January 31, 2021 January 31, 2021 Author admin	Comments Off on ညဘကျကွီးအရေးပျေါ ရောကျသှားသော ပရဟိတမတ်ေတာရှငျမလေး ခိုငျနှငျးဝေ
ကိုဗစ်ကြောင့် ရပ်နားခံထားရတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ပြန်လည်ပြသခွင့်ရဖို့အတွက် ဆုတောင်းစကားဆိုလိုက်တဲ့ စိုင်းစိုင်
ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော်မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နဲ့အထူးတလည်မိတ်ဆက်ပေးဖို့မလိုလောက် ဘူးထင်ပါတယ်။ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ကတော့ အနုပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင် ဘက်စုံထူးချွန်တဲ့သူတစ်ဦးပါပဲနော်။ သူရဲ့ ထွက်ရှိသမျှ သီချင်းတွေ ဟာဆိုရင်လည်း ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားအောင်မြင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ကတော့ လတ်တလောမှာ ဖျော်ဖြေရေးပွဲအမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလ(၃၀)ရက်နေ့မှာတော့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်က”မနှစ်က ဒီအချိန် ပိတောက်ကဖို့ အသည်းအသန်လုံးပန်းနေတာပေါ့ ဒီနှစ် သင်္ကြန်မှာ ပြန်ပြခွင့်ရရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲ ကျနော်တို့ အားလုံး ဆုတောင်းနေကြပါတယ် “လို့ဆိုပြီး ကြိုးစားထားတဲ့ ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်တဲ့ ပိတောက်ဂီတဇာတ်ကားကို ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာ ပြခွင့်ရဖို့ဆုတောင်းနေကြောင်းကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ပေးလာ ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကြောင့် ရပ်နားထားခံရတဲ့ ဇာတ်ကားကြီးကို ပြန်လည်ပြသခွင့်ရဖို့အတွက် ဆုတောင်းစကားဆို လာတာလေးကို ပရိသတ်တွေအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအားလုံးသာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါ တယ်နော်။ Source….Sai Sai Kham Leng’s […]
Posted on January 31, 2021 Author admin	Comments Off on ကိုဗစ်ကြောင့် ရပ်နားခံထားရတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ပြန်လည်ပြသခွင့်ရဖို့အတွက် ဆုတောင်းစကားဆိုလိုက်တဲ့ စိုင်းစိုင်
ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုအကောင်းဆုံး ညွှန်းကိန်းစာရင်းတွင် မြန်မာအဆင့်(၂၄)နေရာ၌ ရပ်တည်
ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုအကောင်းဆုံး ညွှန်းကိန်းစာရင်းတွင် မြန်မာအဆင့်(၂၄)နေရာ၌ ရပ်တည် ဆစ်ဒနီ – သြစတြေးလျနိုင်ငံအ ခြေစိုက် အမှီအခိုကင်းသောတတ် သိပညာရှင်များအဖွဲ့ဖြစ်သည့် Lowy Insistitute က ထုတ်ပြန် သည့် COVID-19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရော ဂါ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မှု အ ကောင်းဆုံးစာရင်းတွင်မြန်မာနိုင် ငံက အဆင့်(၂၄)၌ရပ်တည်နေ ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ Lowy Institute က၎င်းတို့ရ ရှိနိုင်သမျှ အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ယင်းညွှန်းကိန်းအားပြု စုထားရာ နယူးဇီလန်၊ဗီယက်နမ် နှင့်တိုင်ပေတို့က ထိပ်ဆုံးသုံးနေ ရာ၌ ရပ်တည်နေသည် ယငးတတ်သိပညာရှင်များ အဖွဲ့က အတည်ပြုလူနာအရေ အတွက်၊ အတည်ပြုသေဆုံးသူ အရေအတွက်၊ လူတစ်သန်းတွင် အတည်ပြုလူနာအရေအတွက်၊ လူတစ်သန်းတွင် အတည်ပြုထား သည့်သေဆုံးသူအရေအတွက်၊ စစ်ဆေးမှုအချိုးအစားအလိုက်အ တည်ပြုလူနာအရေအတွက်နှင့် လူတစ်ထောင်လျှင်စစ်ဆေးသူ အရေအတွက် စသောအချက် […]
Posted on January 31, 2021 January 31, 2021 Author admin	Comments Off on ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုအကောင်းဆုံး ညွှန်းကိန်းစာရင်းတွင် မြန်မာအဆင့်(၂၄)နေရာ၌ ရပ်တည်
ညဦးက အဖန်ရည်သောက်တာ များသွားသည်ကတစ်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်သိပ်ကြိုက်တဲ့ ဘာညာကွိကွလဲ မလုပ်ရတာ ကြာပြီဆိုတော့ စိတ်ဆာလာတာက တစ်ကြောင်းကြောင့် အိပ်ယာကနိုးလာတယ် ။ အလိုအပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ မိန်းမကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ တရှူးရှူးနဲ့အိပ်နေတာများ ထမီတောင်လန်ပြန်လို့ ။ ဟင်..အမွှေးတွေ ရိတ်ထားပါလား ။ အမြင်တစ်မျိုးထူးနေတဲ့ မီးလောင်ဖုကြီးလို စောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးက ကျုပ်စိတ်ကို မြှူဆွယ်နေသလိုဘဲ ။ ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာ စောက်ဖုတ်မှာမြှော့ပါတဲ့မိန်းမကို လိုးဖူးတဲ့ သူတိုင်းသိကြလိမ့်မယ် ။ ကျုပ်မှာ တန်းတန်းစွဲ ဖြစ်နေရတာပေါ့။ပြီးတော့ ထားခင်က အောက်ပေးလဲကောင်းတယ် မဟုတ်လား။ မနာလိုဖြစ်မနေပါနဲ့ဗျာ။ကျုပ်တောင် ကံကောင်းလွန်းလို့ ။ ခင်ဗျားတို့လည်း သိတဲ့အတိုင်းဘဲ မိန်းမအယောက်တစ်ရာမှာ တစ်ယောက်တောင် စောက်ဖုတ်မြှော့ပါဖို့ဆိုတာ အရှားသားမဟုတ်လား။ အဲတာကြောင့် ထားလေးကို ကျုပ်စွဲနေရတာပေါ့ဗျာ။ထားခင်ဟာ ဖင်သရမ်းတယ်လို့ နာမည်ပျက်ရှိပေမယ့် ကျုပ်နဲ့ကျတော့လည်း ငြိမ်လို့ ။ကြင်နာတတ်တာလည်း လွန်ရောဘဲ။ရွာမှာဆို […]
Posted on January 27, 2021 Author admin	Comments Off on အပေးကောင်းတယ်
ကျွန်တော်၏ အလုပ်မှာ မမယွန်း တို့ ဖွင့်ထားသော အိမ်ဆိုင်လေးကို နေ့စဉ် မုန့် ပို့ပေးရပါသည်. မိဘတွေခြင်းလည်း ရင်းနှီးကြသော ဒီနှစ်အိမ်တွင် ကျွန်တော့်အတွက် မမယွန်းတို့မိသားစုနဲ့စားအိမ်သောက်အိမ်ပဲပေါ့ . အေးချမ်းတည်ငြိမ်သော အပြုံးပိုင်ရှင်နှင့် စကားပြောဖြစ်ရင် ပိုပျော်သလိုပါပဲ.စိတ်မကောင်းစရာတခုကတော့မမယွန်း ဟာ ဆေးသမားယောကျာ်းနဲ့ အပြီးကွဲကွာထားတည့် တစ်ခုလပ်မိန်းမပျိုပေါ့. ကျွန်တော်အသက်နှစ်ဆယ့်ရှစ် မမက သုံးဆယ့်ငါး မမ အိမ်ထောင်ပျက်သွားတာ သုံးနှစ်ကျော်အချိန် တနေ့မှာပေါ့ လေ. ပို့ နေကြ မုန့်တွေနဲ့ မမယွန်းတို့ အိမ်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့ကျွန်တော်ဟာ လူတစ်ယောက်မှ မတွေ့ရသော အခက်ကျုံနေရသည် အပေါ့ သွားချင်စိတ်ဖြစ်လာသော ကျွန်တော် နောက်ဖေးသို့ သွားခိုက် မထင်မှတ်ပဲ ညည်းသံသဲ့ သဲ […]
Posted on January 27, 2021 Author admin	Comments Off on တစ်ခုလပ်မိန်းမပျို